पाकिस्तान हल्लाउने पोस्टकार्ड - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > मनाेरंजन > पाकिस्तान हल्लाउने पोस्टकार्ड
पाकिस्तान हल्लाउने पोस्टकार्ड
April 19, 2019 April 19, 2019 GRISHI611
काठमाडौँ — घटना एक महिनाअघिकै हो । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर पाकिस्तानमा ‘महिला’ शीर्षकको मार्च गरिएको थियो, जसमा ७ हजार ५ सय महिला सामेल थिए । सोही मार्चका लागि २२ वर्षीया दुई युवती रुमिसा लखानी र रसिदा शब्बीर हुसैनले पनि एउटा पोस्टकार्ड तयार पारे ।
कालो चस्मा लगाएर कपाल छोडेकी एक महिला खुट्टा फैलाएर बसेको स्केच तयार पार्दै यी दुई डिजाइनरले त्यसको शीर्षक दिए, ‘यहाँ म बिल्कुल सही तरिकाले बसेकी छु ।’ यति बेला सोही प्लेकार्डले पूरा पाकिस्तानलाई तताएको छ । खासगरी पुरुषहरूले चर्को आलोचना गरेको उक्त पोस्टरबारे कतिपय महिलावादीले पनि आपत्ति जनाएका छन् । तर बहुसंख्यकले भने रुमिसा र रसिदाको कदमको सराहना गर्दै यसले देशमा नयाँ बहस खडा गरिदिएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
सन् २०१८ मा ‘वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम’ले पाकिस्तानलाई विश्वभरका १ सय ४९ देशमध्ये लैंगिक समानताको सवालमा खराब देशका रूपमा सूचीकृत गरेको थियो । त्यहाँ महिलाले घरेलु हिंसा, जबरजस्ती विवाह, लैंगिक उत्पीडनजस्ता कुराहरूको सामना गर्दै आउनुपरेको छ । कतिपय अवस्थामा आत्मसम्मानमै चोट खेप्नुपरिरहेको छ ।
मार्चको उद्देश्य पनि कट्टरपन्थीहरूलाई झटका दिने भएको उल्लेख गर्दै आयोजकमध्येकी एक मोनिजा भन्छिन्, ‘हामीले महिलाको यौनिकता निर्धारण गर्नेलाई चुनौती दिएका थियौं । धार्मिक समाजमा महिलाले आफूलाई पूरा ढाकेर घरमै बस्नुपर्ने अवस्था छ । हामी यसलाई चुनौती दिन चाहेका थियौं ।’ यसका लागि रुमिसा र रसिदाको प्लेकार्ड एउटा क्षेप्यास्त्र सावित भएको छ । ‘महिला कसरी बस्नुपर्छ’ मुद्दामै रुमिसाको दिमाग चल्यो ।
‘हामी महिलाबाट सौम्यताको अपेक्षा गरिन्छ । त्यसैले पनि हामीले आफ्नो शरीरको आकार नदेखियोस् भन्नेमा बढी चिन्ता गर्नुपर्छ । जब कि पुरुषहरू मनमौजी खुट्टा फट्टयाएर बस्न सक्छन । यसमा कसैले ध्यान पनि दिँदैन,’ हबिब युनिभर्सिटीमा कम्युनिकेसन डिजाइनकी विद्यार्थी रुमिसा भन्छिन्, ‘तर जब पोस्टकार्डलाई लिएर चर्को बहस सुरु भयो, आफूलाई नारीवादी बताउने मेरै साथीहरू पनि यो पोस्टरलाई अनावश्यक भनिरहेका छन् ।’ देशकै एक प्रमुख नारीवादी किस्वर नहिदले समेत रुमिसा र रसिदाको प्लेकार्डले परम्परा र मूल्यमान्यताको अपमान गरेको आरोप लगाएकी छन् । ‘यस्तो खालको पोस्टरले अधिकार प्राप्ति हुन्छ भन्ने कसैले सोच्छ भने ऊ निर्दोष मान्छेको हत्या गरेर स्वर्ग गइन्छ भन्ने सोच पाल्ने दिग्भ्रमित जिहादीजस्तै हुन्,’ किस्वरले भनेकी छन् ।
महिला मार्चकी आयोजक मोनिजाको भनाइ फरक छ । भन्छिन्, ‘सडकमा चर्को आवाजसहित यस्तो गर्दा अरूका लागि असहज भयो । उनीहरूलाई यस्तो काम इस्लामका लागि खतरा लाग्यो । तर हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन । इस्लाम महिलावादी धर्म हो ।’ तर फेसबुकमा एक लेख्छन्, ‘आफ्ना छोरीहरूका लागि मलाई यस्तो समाजको जरुरी छैन ।’ अर्की महिला लेख्छिन्, ‘म पनि महिला हुँ तर मलाई यो ठीक लागेन ।’ अर्का फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिन्छन्, ‘त्यो महिला दिवस थियो, कुकुर्नी दिवस थिएन ।’ केही चर्का आलोचनाबाहेक अधिकांशले भने प्लेकार्डको भावलाई स्वागत गरेका छन् ।
‘खासमा मैले बुझ्न नसकिरहेको कुरा, पोस्टकार्डमा लेखेको शब्दले मान्छेहरू किन डराइरहेका छन् ? जब कि उनीहरूलाई त पाकिस्तानमा महिलालाई गुलाम बनाउनेप्रति पो सर्म आउनुपर्थ्यो,’ एक महिला पोस्टकार्डको समर्थनमा भन्छिन् । एक अनलाइन भिडियोमा डा. मञ्जुर अहमद मेंगलले त रुखो तर्क गर्दै भनिदिए, ‘मेरो शरीर, मेरो इच्छा । तिम्रो शरीर तिम्रो इच्छा । त्यसो भए पुरुषको शरीर पुरुषको इच्छा । ऊ जोमाथि चाहन्छ चढ्न सक्छ ।’ उक्त अभिव्यक्तिपछि मञ्जुरलाई बलात्कारीलाई उक्साएको आरोप पनि लागेको छ । त्यसो त उक्त महिला मार्चपछि आयोजक सदस्यलाई मार्ने र बलात्कारको धम्की बारम्बार आउन थालेको छ ।
पोस्टरका कारण विवाद चर्कंदै गए पनि रुमिसालाई भने आफ्नो कामप्रति कुनै पछुतो छैन । भन्छिन्, ‘म त खुसी नै छु । पोस्टरकै कारण यति धेरै मान्छेको ध्यान त तानियो । यसमा मलाई लाज वा डर छैन । यही होस् भनेरै त हामीले त्यस्तो खालको नारा लेख्यौं । हामी चाहन्थ्यौं कि महिला मार्च र यससँग जोडिएको मुद्दामा अधिक मान्छेको ध्यान जाओस् ।’ यति बेला छरछिमेकदेखि आफन्तले समेत यी दुई युवतीका परिवारलाई छोरीलाई यस्ता र्‍यालीमा जान दिन हुन्थेन भन्दै दबाब दिइरहेका छन् । तर परिवारले भने आफ्ना छोरीहरूको कदमलाई साथ दिइरहेका छन् ।
देशै लज्जित बनाउने प्रियंकाको रेड कार्पेट ठट्टा